Wasiirka amniga Puntland,” Soomaaliland doorasho kuma qaban karto Sanaag, ujeedadoodu waa inay marin habaabiso indhaha Beesha Caalamka. | puntlandi.com
Wasiirka amniga Puntland,” Soomaaliland doorasho kuma qaban karto Sanaag, ujeedadoodu waa inay marin habaabiso indhaha Beesha Caalamka.
Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka amniga Puntland ayaa gaaray magaalada Badhan ee gobolka Sanaag, waana wafdigii labaad oo dowladda Puntland oo halkaas taga.
Wasiirka ayaa sheegay in ujeedada socdaalka ay ku tageen gobolka Sanaag ay salka ku hayso inay beesha Caalamka iyo Ummadda Soomaaliyeed tusaan inaysan jirin Doorasho Soomaaliland ay leedahay oo ka dhacaysa gobolka Sanaag.
Wuxuu intaas ku daray in hadal haynta ah in Sanaag ay Doorasho ka dhacayso ay tahay mid ay Soomaaliland ku doonayso inay ku marin habaabiso Indhaha Beesha Caalamka iyo Ummadda Soomaaliyeed.
Axmed Cabdullaahi Jaamac, ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan gobolka Sanaag uusan soo marin guumaysi, wuxuna xusay inaysan dhici karin shacab kale ay shacabka Sanaag u dawladeeyaan.
Wasiirka Wasaaradda amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Jaamac, ayaa sheegay inaysan cidna duulaan ku ahayn, balse cidii diida Nabadgalyada, walaalnimada iyo daris ku wada noolaan shaha ay talaabo ka qaadi doonaan.
Dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag ayuu ugu baaqay inay Illaashadaan dawladnimadooda, ayna difaacdaan jiritaankooda.
“Waxaan joogaa Badhan, wax doorasho iyo calaamad doorasho oo ka muuqataa ma jirto, waxaan arrintaasi suurtagaliyay shacabka oo og, una bisil inay ilaashadaan oo xajistaan amniga, sharaftooda iyo ilbaxnimadii taarikhigi lahaa ee ay lahaayeen, cidna duulaan kuma qaado, cidna ma gardaraysato, cid walba waxaanu doonaynaa inaanu nabad, Islaanmo, walaaltinimo iyo somaalinimo kula nolaano, cidii intaa ka soo gudubta waajibkeedu waa gooni” ayuu yiri Wasiirka oo hadalkiisa sii wata.